ट्विटर आधारभूत: कसरी ट्विटर प्रयोग गर्ने (शुरुवातकर्ताहरूको लागि) | Martech Zone
यो अझै छिटो ट्विटरको निधन कल गर्न को लागी हो, यद्यपि व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ उनीहरू अपडेट गर्न जारी राख्छन् जुन प्लेटफर्म बढाउँदैन र सुदृढ गर्दैन। हालसालै, तिनीहरूले साइटहरूमा उनीहरूको सामाजिक बटनहरू मार्फत उपलब्ध गणनाहरू हटाएका छन्। म कल्पना गर्न सक्दिन किन र यस्तो देखिन्छ कि यसले समग्र संलग्नतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्दछ जब तपाईं कुञ्जी मापन साइटहरूमा ट्वीटरको ट्राफिकलाई हेर्नुहुन्छ।
पर्याप्त गुनासो गर्दै ... राम्रो सामानहरू हेरौं! ट्विटरमा वास्तविक-समय डाटाको धन अनौठो हो। जबकि फेसबुक कुराकानी अनलाइन हुन सक्छ, ट्विटर मेरो विचारमा मुटुको धडकन रहन्छ। फेसबुक हाइलाइट गर्दछ र डाटाको बहुमत फिल्टर गर्दछ, त्यसैले उपयोग र सment्लग्नता कठोर रूपमा स्क्यू गरिन्छ। ट्विटर मा त्यस्तो छैन।
के ट्विटर भिन्न बनाउँछ
ट्विटर डाटाको प्रवाह हो जुन उडानमा जारी रहन्छ। तपाईले धेरै खाताहरू अनुसरण गर्नुहुन्छ, स्ट्रिमको द्रुत। तर यो फिलिटर गरिएको छ, लक्षित छैन, र सँधै दृश्यमान छ। र अन्य सामाजिक प्लेटफर्महरू को विपरीत, तपाईं कुरा गर्न चाहानुहुने खाताहरू पहुँचयोग्य छन्। केवल एक फाल्नुहोस् @dgglaskarr र तपाईं मेरो ध्यान खिच्न र सिधा मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अरु कहाँ सम्भव छ? र यदि तपाईं केहि अनुसन्धान गर्न चाहानुहुन्छ भने, बस एक ह्याशट्याग प्रयोग गरेर टर्म खोज्नुहोस्, जस्तै #marketing.
ट्विटर को साथ शुरू गर्नुहोस्
साइन अप - र अन्डरस्कोर र जटिल संयोजन बिना एक उत्तम ट्विटर ह्यान्डल खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। सबै महान ह्यान्डलहरू लिएका छैनन्; हामी जहिले पनि छक्क पर्छौं कि हामी अझै पनि हाम्रा ग्राहकहरूको लागि सही ह्यान्डलहरू फेला पार्न सक्षम छौं। म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु कि दुबै व्यक्तिगत खाता र कर्पोरेट खाता दुबै ओभरल्यापिंग गर्नु भन्दा। एक ब्रान्डको साथ, प्रमोशनहरू व्यक्तिगत खाताहरूमा भन्दा बढि अपेक्षित हुन्छन् जहाँ तपाईं फलोहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं अनुसरण गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंको प्रोफाइल सेट अप गर्नुहोस् - कसैले पनि विश्वास गर्दैन वा अण्डा प्रतिमा अनुसरण गर्दैन, त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत खाताको लागि आफ्नो फोटो र तपाईंको कम्पनीको लागि लोगो थप्न निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको रंग योजना अनुकूलित गर्न समय लिनुहोस् र एक सुन्दर पृष्ठभूमि छवि फेला पार्नुहोस् जुन व्यक्तिको रुचि समेट्छ।
तपाईंको बायो राख्नुहोस् छोटो र मीठो! यूआरएलहरू, ह्यासट्यागहरू, अन्य खाताहरू र संक्षिप्त वर्णनहरू सामग्रीहरू बनाउने प्रयास गर्नु धेरै बाध्यकारी छैन। मेरो टिप यहाँ छ - तपाईको विशेषज्ञता के हो र तपाईंलाई कुन कुरा अनौंठो बनाउँछ? तपाईंको बायोमा राख्नुहोस् र मान्छेहरूले तपाईंलाई खोजहरूको माध्यमबाट फेला पार्न र पछ्याउन सक्दछन्।
ट्विटर अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
चाहे तपाईं डेस्कटप, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा हुनुहुन्छ, एक नेटिभ छ ट्विटर अनुप्रयोग तिम्रो लागि कुरिरहेको छु! यदि तपाईं सबै बाहिर जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ TweetDeck - सबै घण्टी र सिट्टीको साथ एक पूर्ण चौड़ाई प्लेटफर्म।
ट्वीट गर्न समय
ट्वीट्स - ट्विटरले १ets० क्यारेक्टरहरू भन्दा पर ट्वीटहरूको चरित्र गणना विस्तार गर्ने कुराकानी गरेको छ। मलाई पक्का आशा छैन, ट्विटरको धेरै कला र आकर्षण भनेको राम्रोसँग सोचिएको ट्वीटको द्रुत खपत हो। यो हाइकु लेख्ने जस्तो छ; यो अभ्यास र केही विचार लिन्छ। यो राम्रोसँग गर्नुहोस्, र मान्छेहरूले साझेदारी र अनुसरण गर्नेछन्।
ह्यासट्याग प्रयोग गर्नुहोस् - कम्तिमा एउटा ह्यासट्याग छनौट गरेर तपाईंको संलग्नता डबल गर्नुहोस्, दुई उत्तम छ। यदि तपाइँ केहि गर्न चाहानुहुन्छ ह्याशट्याग अनुसन्धान, हामीले प्लेटफार्महरूको एक टन सूचीबद्ध गरेका छौं (राइटटाग साँच्चै राम्रो छ!)। ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरूले मञ्चको अनुसन्धान गर्दा प्रभावकारी ह्यासट्याग प्रयोग गर्नाले तपाईंलाई भेट्टाउनेछ
तपाईंको ट्विटर पहुँच बढाउनुहोस्
ट्विटरमा तपाईंको उद्योग नेताहरूका खोजी गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पछ्याउनुहोस्, उनीहरूको सामग्री साझा गर्नुहोस्, र तिनीहरूसँग स engage्लग्न हुनुहोस् जब तपाईं कुराकानीमा मूल्य थप्न सक्नुहुनेछ।
ट्विटरमा तपाईका ग्राहकहरूको खोजी गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई अनुसरण गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्, तिनीहरूसँग स engage्लग्न हुनुहोस् र राम्रो सामग्री बनाउने सम्बन्ध सिर्जना गर्न उनीहरूको सामग्री फिर्ता गर्नुहोस्।
कीरा नहुनुहोस्। स्वचालित प्रत्यक्ष सन्देश प्लेटफर्महरू बेवास्ता गर्नुहोस्, अनावश्यक रूपमा व्यक्तिहरूलाई लेख्नुहोस्, र प्रयोग गर्नुहोस् तपाइँको अनुयायी बढ्नुहोस् योजनाहरू। तिनीहरू चिढचिढाहट छन्, र तिनीहरू कृत्रिम रूपले तपाइँको संख्या प्रदर्शन गर्छन् तपाईलाई राम्रो प्रदर्शन गरिरहनुभएको बिना नै प्रदर्शन गर्दै।
जब तपाइँ मान प्रदान गर्नुहुन्छ प्रमोट गर्नुहोस्
एक घटना आउँदै छ? तपाईंको अनुयायीहरूले भाग लिन कसरी लाभ उठाउन सक्छन् भन्ने बारे सुझावहरूको साथ कार्यक्रमलाई उल्टो बनाउने ट्वीटहरूको समय तालिका बनाउनुहोस्।
छुट प्रदान गर्नुहोस् जब तपाईं सक्नुहुन्छ, ट्विटरले उत्कृष्ट कुपन कोड वा छुट मनपर्दछ।
बढुवा नगर्नुहोस्, मान प्रदान गर्नुहोस्। फलोअरहरूको मुद्दाहरू सुन्न र केही सुझावहरू सार्वजनिक रूपमा लाभांशमा भुक्तानी हुनेछ।
याद गर्नुहोस् कि ट्विटहरू उडानमा उडेर जान्छन् ... जब तपाईंसँग साझेदारी गर्न राम्रो चीज हुन्छ, केहि समय यसलाई साझा गर्नुहोस्।
ट्विटरको साथ WordPress एकीकृत गर्नुहोस्
हाइलाइट र सेयर गर्नुहोस् - पाठ हाइलाइट गर्न र यसलाई ट्विटर र फेसबुक मार्फत साझेदारी गर्न र लिंक्डइन, ईमेल, जिंग, र व्हाट्सएप सहित अन्य सेवाहरूको लागि प्लगइन। त्यहाँ बिल्ट-इन गुटेनबर्ग ब्लक पनि छ जसले तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई क्लिक गर्न साझेदारी गर्न अनुमति दिनेछ।
सजिलो सामाजिक शेयर बटन - अनुकूलन र एक धेरैको साथ तपाइँको सामाजिक यातायात साझा, अनुगमन र वृद्धि गर्न सक्षम गर्दछ विश्लेषण विशेषताहरु।
र यदि तपाइँ ट्विटरमा तपाइँको सामग्री स्वतः प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ जेटप्याक प्लगइन सुविधा प्रचार यो सही ढंगले गर्दछ!
याद गर्नुहोस्, ट्विटर म्याराथन हो, स्प्रिन्ट होईन। तपाईको निम्न जैविक र बढ्दै जाँदा तपाईले यसका फाईदाहरू देख्नुहुनेछ। धेरै चक्रवृद्धि ब्याज जस्तै, तपाईं आफ्नो पहिलो केही ट्वीट पछि सेवानिवृत्ति गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। बाट यो इन्फोग्राफिक SalesForce केही थप अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ ... म पक्का छैन कि तपाईं एक समर्थक हुनुहुनेछ (यदि त्यहाँ त्यस्तो कुरा छ), तर यो राम्रो सल्लाह हो।
टैग: तपाइँका अनुयायीहरू बढ्नुहोस्hashtagsट्विटर कसरी प्रयोग गर्नेरीट्वीटTweetTweetdecktwitterट्विटर अनुप्रयोगहरूट्विटर बेसिक्सट्विटर इन्फोग्राफिकट्विटर पहुँच
डिसे 15, 2015 मा 5: 13 AM